Tag Archive for "गोपाल पराजुली" - प्रा. डा. केसी तारेखमा रिहा, प्रधानन्यायाधीशलाई पर्यो नैतिक दवाव
२६ पुस, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तारेखमा रिहा गर्ने आदेश दिएपछि प्रा डा गोविन्द केसीलाई महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल लगिएको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले राजीनामा नदिएसम्म अनशन बस्ने प्रा डा केसीले जानकारी दिएका छन् । डा केसीको अविलम्ब रिहाइको माग गर्दै आज पनि माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको थियो । सर्वोच्च अदालतको अवहेलना मुद्दामा सोमबार पक्राउ परेका डा केसीको रिहाइको माग गर्दै उनका समर्थकले आज माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।	थप पढ्नुहोस्
२७ कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले मुद्दा व्यवस्थापनलगायत विषयमा वरिष्ठ अधिवक्तासँग सुझाव लिएका छन् । प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले पेशी व्यवस्थापन, अतिरिक्त समय थप काम गर्ने लगायत पीडितलाई छिटो न्याय दिन बिहान ९ः३० बजेदेखि इजलास राख्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्तासँग सुझाव मागेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले बिहान ९ः३० मा इजलास शुरु गर्ने कुरा त्यति वैज्ञानिक नभएको हुँदा शुरुमा १०ः३० देखि शुरु गर्दा उपयुक्त हुने विषयमा सुझाव दिएका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
२ साउन, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्तावित गोपाल पराजुलीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । आइतबार बसेको समिति बैठकले पराजुलीको सुनुवाइलगत्तै नाम अनुमोदन गरेको हो । पराजुलीविरुद्ध समितिमा कुनै उजुरी परेको थिएन । समितिको निर्णयसँगै पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्ने बाटो खुलेको छ । कानुन व्यवसायीका रूपमा लामो समय काम गरेपछि १८ कात्तिक ०४८ देखि पराजुली पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशबाट न्याय सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । तीन वर्षअघि उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका थिए ।	थप पढ्नुहोस्